O nwere ike ịbụ onye kacha njọ na ngalaba na-edeba aha mgbe Martech Zone
N'ụtụtụ a, onye ahịa na-akpọ anyị ụjọ. Anyị na ha rụkọrọ ọrụ iji mepụta saịtị ọhụrụ obere oge, mana ihe niile adịghị n'ịntanetị ugbu a. A DNS nke ụdị ụfọdụ. Ha IT guy kpọrọ anyị ka anyị hụ ma anyị agbanweela ihe ọ bụla. Anyị amabeghị asị mgbe niile ịnụ maka nsogbu ndị a ma chọọ inyere ha aka idozi nsogbu ahụ.
Mgbe ụfọdụ ọ na - abụ ihe dị mfe dịka ịnwe kaadị akwụmụgwọ ochie na faịlụ na ngalaba ga - agwụ. Ma n’oge ndị ọzọ, ọ bụ ezigbo nsogbu na ngalaba na-edeba aha. N'okwu a, onye na-edeba aha bụ Hostgator. Anyị enweelarị nsogbu na ha ebe anyị na-enweghị ike idezi ihe ndekọ DNS ọ bụla na-enweghị ọrụ na otu ndị na-akwado ha.
Mmelite: Na ịgwa ndị ọbịa Hostgator okwu ụbọchị niile, ọ dịka otu n'ime nsogbu kachasị bụ na Hostgator abụghị n'ezie onye na-edeba aha na ngalaba ma ọlị. Edere ngalaba ahụ site na otu 3rd, Launchpad. Yabụ, n'agbanyeghị na ị nwere ike iche na ị na-enweta nkwado, ị na-agwa onye na-enweghị ike ịchịkwa akaụntụ gị n'ezie.
Anyị gwara ndị ahịa anyị ka ha bugharịa ngalaba ahụ na GoDaddy ebe anyị nwere ike ịnweta njikwa zuru oke.
Mana n'ụtụtụ a, saịtị niile agaghị edozi. Mgbe anyị mere nyocha WHOIS, anyị hụrụ na gbanwere aha ihe nkesa:
Yabụ, anyị banyere n'ime Hostgator iji nyochaa ntọala ahụ ma sava Aha Aha ahụ na akaụntụ ahụ. Agwara m onye ahịa ahụ ka ọ zipu ozi ịntanetị ọ bụla ha natara n'aka Hostgator na adreesị ozi-e nchịkwa na ndekọ. Adreesị ozi-e adreesị bụ adreesị gmail nke ha anaghị enyocha kwa ụbọchị, omume nkịtị.
Mgbe anyị gụchara ozi ịntanetị sitere na Hostgator, anyị hụrụ otu onye rịọrọ iji nyochaa adreesị ozi-e na faịlụ ahụ. Nke a merụrụ ahụ bụ nsogbu. Ebe ọ bụ na onye ahịa ahụ enwetabeghị adreesị ozi-e na faịlụ ahụ, Hostgator weghaara onwe ha ịgbanwe Server Server na NS1.VERIFICATION-HOLD.SUSPENDED-DOMAIN.COM
N'ikwu eziokwu, anụtụbeghị m gbasara ihe nzuzu na ndụ m. Na-emechi saịtị nke ụlọ ọrụ na email mgbe ha nwere akaụntụ akwụ ụgwọ?! Apụrụ m ịhụ ma ha akwụbeghị ụgwọ ha, mana nke a bụ mkpari.
Anyị na-agbatị nnyefe nke ngalaba site na Hostgator na GoDaddy iji kwụsị isi ọwụwa a.
Tags: dnsonye na-edeba aha ngalabandebanye ahaHostgator
Jun 28, 2016 na 1: 52 PM
Enwere m ike ịkekọrịta akụkọ gị na reddit.com/r/talesfromcallcenters?
Jun 28, 2016 na 1: 54 PM
Jun 29, 2016 na 8:16 AM
Nwere akụkọ yiri ya na onye ahịa ọzọ na onye na-edeba aha ọzọ. Ha rịọrọ, site na email, iji kwado ngalaba na adreesị email maka ngalaba ahụ. Onye ahịa chere na ọ bụ spam ma ọ zaghị. Ya mere, anyị ga-agbaso usoro iji "kpọghee" akaụntụ ahụ. E doziri ya n'ihe na-erughị otu awa mgbe anyị chọtara ya, mana m na-eche ma nke a ọ na-abawanye omume na-emekarị.
Jun 29, 2016 na 8:24 AM
Ọ dị mkpa ka ọ kwụsị. Ọ bụrụ na akwụ m ụgwọ maka ngalaba m, ọ nweghị onye ga-enwe ikike ịkwụsịtụ ya ruo oge mmeghari ohuru ya ma ọ bụ belụsọ ma enwere ụdị mmebi iwu pụtara.
Jun 29, 2016 na 10: 49 PM
Echere m na m hụrụ ihe gbasara iwu ọhụrụ. Ahuru m ya na goDaddy obuna. Nyochaa ozi ịntanetị gị.
Jul 4, 2016 na 7: 58 AM
Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ ndị enyi gị dị ezigbo mkpa, gịnị kpatara ị ga-eji lelee hostgator. I nwetara ihe ị kwụrụ.
Jul 4, 2016 na 8:05 PM
Enweghị mgbagha ọ bụla. Nke a bụ onye ahịa nke bịakwutere anyị, anyị ahọrọghị Hostgator. Kemgbe ahụ, anyị akwagala na ngalaba ha site na Hostgator na onye na-edeba aha a tụkwasịrị obi.